myanmarwikileaks: တာလတ် ပစ် ဒုံးလက်နက် ထုတ်လုပ်မှု
ကိုယ်ပိုင် အမှတ် ၄+++++ ဗိုလ်ကြီး +++++++ သည် ပဲခူးတိုင်း တွင် ၁၉၇၅ခုနှစ်၌ မွေးဖွားခဲ့ပြီး ၁၉၉၃ ခုနှစ် တွင် ဆယ်တန်း စာမေးပွဲ အား က အဆင့် ဖြင့် အောင်မြင်ပြီးနောက် စစ်တက္ကသိုလ်သို့ တက်ရောက် ပြီး ခဲ့ပြီး အပတ် စဉ် ၅+သင်တန်းဆင်းတစ် ယောက် ဖြစ်သည်။
မေမြို့ စစ်တက္ကသိုလ် မှ ဘွဲ့ ရရှိပြီးနောက် ရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ် လက်အောက်ခံ ခြေလျှင် တပ်ရင်း တစ်ခု တွင်လအတန်ကြာ သင်တန်း တစ်ခု တက်ရောက် ရပြီး ၁၉၉၉ခုနှစ် တွင် တနင်္သာရီ တိုင်း သရက် ချောင်း တွင် တာဝန် ကျကာ ၂၀၀၂ ခုနှစ် တွင် ဗိုလ်ကြီး ရာထူး ဖြင့် ရှမ်းပြည်နယ် တွင် တာဝန် ကျသည်။၂၀၀၆ ခုနှစ် တွင် နေပြည်တော် ကာကွယ်ရေး ၀န်ကြီး ဌာန မှ ဆင့်ခေါ်မှု တွင် မကွေးတိုင်း မြိုင် မြို့ နယ် မှ ထပ် မံသွားရသည့် ပေါက်မြို့ ၏ မြောက်ဘက် မိုင် ၃၀ ခန့် အကွာ ရှိ တပ်ရင်း တစ်ခု တွင် တာဝန် ထမ်းဆောင်ရန် အတွက် စစ်သုံး မော်တော်ယာဉ်ဖြင့် လိုက်လံ ပို့ ဆောင်ပေးသည်။
စစ်ဆင်ရေး အဖွဲ့ များ ၏ လက်အောက် ခံ မဟုတ် သည့် ထိုတပ်ရင်း တွင် ဗိုလ်မှုးကြီးအဆင့် ရှိ တပ်ရင်းမှုး တစ်ယောက် အုပ်ချုပ်ပြီး ရောက်ခါ စ တွင် နှစ်ရက် ခန့် သီးသန့်ထားရှိ ကာ ထို သို့ စောင့်နေစဉ် အတောအတွင်း ဗိုလ်ကြီးမြင့် နိုင် ဆိုသူက နေပြည်တော်သို့ သတင်း ပို့ထားပြီး ဖြစ်သော် လည်း တပ်ရင်းမှုး ခရီးထွက် နေ သဖြင့်နောက်ထပ် နှစ်ရက် ခန့် စောင့်ဆိုင်းရန် လာရောက် ပြောဆို သွားသည်။ နှစ်ရက် ခန့် အကြာတွင် လေအေးပေးစက် တပ် ဆင် ထား သည့် နှစ်ထပ် တိုက် ရုံးခန်း တစ်ခုသို့ မသွား ခင် တွင် တစ်ကိုယ်လုံး အား အသေအချာ ရှာဖွေပြီး နောက် ပါလာသောပစ္စည်းများ ကို လည်း ရှာဖွေ ပါသည်။
လျှပ် စစ်မုတ်ဆိတ် ရိတ်စက် ကို တပ်ကြပ်ကြီး နှစ် ဦးနှင့် အဖွဲ့ က ရှာဖွေ ပုံစံ ဖြင့် သိမ်း သွားပြီး ထို သို့ သိမ်း သွားရာတွင် ထိုတပ်ကြပ်ကြီး က “ဒီကို လာစဉ် အထက် က သယ်ဆောင် မသွားရန် ပစ္စည်းများ ကိုမပြောလိုက်ဘူးလား” မေးရာ “သတိ မထား မိဘဲ ပါလာသည် ” ဟု ပြန်လည် ဖြေရှင်း ခဲ့သည်။၎င်း က ဆက်လက်၍ “အခြား လျှပ် စစ် ပစ္စည်း ဘာပါရှိ သေးလဲ” ဟု မေးရာ ဘာမှ မပါရှိ တော့ကြောင်း ပြန်လည်ဖြေကြား ခဲ့သည်။
တပ်ရင်းမှုးမှာ ထိုဒေသတွင် လုံခြုံရေးတာဝန် ထမ်းဆောင်ရသူသာဖြစ်ပြီး ဒု-ဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်မောင်သန်း ၏ တပည့်ရင်း ဖြစ်သူ ဗိုလ်မှုးကြီး ကျော်ရွှေ ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ထိုဒေသ၏ ထူးခြားဖြစ်စဉ် ကို ကာကွယ်ရေး ၀န်ကြီးဌာန သို့ မိနစ် ၆၀ တိုင်းတွင် တစ်ကြိမ် အစီရင်ခံစာတင်ရပြီး ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သူရ ရွှေမန်းဆီ ကို နေ့ စဉ် တိုက်ရိုက် အစီရင် ခံစာရေး တင်ရသည်။
ဗိုလ်မှုးကြီး ကျော်ရွှေ ၏ ရုံးခန်း တွင် CCTV လှို့ ဝှက် ကင်မရာများ ၊ Fax စသည့် ဆက်သွယ်ရေး ပစ္စည်းများ ရှိပြီး ထိုဒေသတွင် သုံးနှစ်တာဝန် ထမ်းဆောင် စဉ် အတွင်း အဆိုပါရုံးခန်း သို့ သုံးကြိမ်သာ ရောက်ရှိ ခဲဖူးသည်။ ထို ရုံးခန်း ရှိ ရာ အဆောက်အဦမှာ ဆယ်မိနစ် ခန့် လမ်းလျှောက် လိုက်လျှင် ရဟတ်ယာဉ် လေးစီးခန့် ရပ် နိုင်သည့် နေရာတွင် စစ်သုံး ရဟတ်ယာဉ် တစ်စီးမှာ အချိန် ပြည့်ရပ်ထားပြီး ဗိုလ်ချုပ်မှုး ကြီး သန်းရွှေ ရှောင် တစ်ခင်လာရောက် စစ်ဆေးလျှင် ရဟတ်ယာဉ် ငါးစီးခန့် ရှိသည်။ ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီး သည် မိုးရာသီ မှ လွဲ၍ တစ်နှစ်လျှင် လေးကြိမ် ခန့်ကျောချောင်း စစ်လက်နက်ပစ္စည်း ထုတ်လုပ် တပ်ဆင်ရေး စက်ရုံ သို့ လာသည်။
အထက် ပါသတင်း ပေးပို့ မှု မှာ မြန်မာ့ တပ်မတော်မှ လက်ရှိ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေဆဲ ဗိုလ်ကြီး အဆင့်ရှိ သူ တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ၎င်း ၏ လုံခြုံရေး အရ အမည် ၊ တာဝန်ထမ်းဆောင် ခဲ့သည့် နေရာများ နှင့် မွေးဖွားရာ တို့ ကို ပေါက် မြို့ တွင် တာဝန်မထမ်းဆောင်ခင် အထိ အကုန် လွှဲပြောင်းထားပါသည်။
ကျန်ရှိ နေ သည် များ ကို ဆက်လက် ဖော်ပြမည် ဖြစ်ပါသည်။ နောက် တွင် မြန်မာဝီကီလိခ်၌ ယခု အကြောင်း အရာ ကို ၁ . ၁ . ၁ ဟူသော ဂဏန်းရိုက်၍ ရှာပါ ။
Posted by မြန်မာ ၀ီကီလိခ် at 6:35 AM